Aung Win Hein (Noble): 04/24/12
ဆေးရုံလုပ်သားများက လူနာကို တွန်းလှည်းပေါ် တင်လာကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ လူနာက သတိပြန်ရလာပါတယ်။
လူနာက ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့။
ပြီးတော့ လူနာက မေးတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ ကျနော့်ကို ဘယ်ခေါ်သွားနေတာလဲဗျ”
“ဒါပေမယ့် ကျနော်မှ မသေသေးပဲဟာ”
“ကျနော်တို့ကလည်း ရေခဲတိုက်ကို မရောက်သေးပါဘူး”
လူသားတိုင်း ကျန်းမာကြပါစေ... လူသားတိုင်း ချမ်းသာကြပါစေ...
ခန္ဓာကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့စောင့်ရှောက်ပါ။ စိတ်ကို စာဖတ်ခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ပါ။...
Social Media Abuse (Social Media အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း) - Social Media ဟာ ပြောပြလို့မရအောင် ၂၀ ရာစုသစ်မှာ အရေးပန်းစားလာခဲ့တာ အမှန်ပါဘဲ။ လူတိုင်းဟာ social media ကို နေ့စဉ်အသုံးစွဲပြုသလို၊ Social Media ပေါ်မှာမြင်တေ...
ဖားအောက်တောရ (Batam) သို့ တစ်ခေါက် - အင်ဒိုနီရှား ဘက်တမ်ကျွန်းဖက်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မကြာခဏဆိုသလိုရောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဖာအောက်တောရကျောင်းရှိမှန်းကို မသိတာ။ ရုံးက အကိုတစ်ယောက်က မင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း...
YouTube မှ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၃ မျိုး -
ပညာတတ်ဆိုတာဘာလဲ - အကိုကြီး ကိုအောင်ဇော်ဝင်းက ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမတဲ့ အနေနဲ့ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ သူရေးတဲ့ အဖိုးတန် ဆောင်းပါးလေးပါခင်ဗျာ။ ..... ပညာခေတ်၊ပညာသည်သာ အရာရာဟု ပြောရမလောက်ြ...
ALL CLEAR: FeedMedic Alert for WelcomeNyachitthukalay - Your Source Feed, http://nyachitthukalay.blogspot.com/feeds/posts/default, is now working fine. Carry on! We will let you know if anything bad happens in...
Advanced System Care.8.1.serial.crack - ကွန်ပျူ တာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမဲ့ ကောင်လေးပါ။ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်းဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်လေးပါ။ အောက်မှာဒေါင်းပါ Download Torrent
အရှင်ရာဇိန္ဒ ( ရဝေနွယ်-အင်းမ)
ညီနေမင်း ® MyanmarBlogger | အချစ်အိမ်မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏
(အတွေး) တွေးမိတိုင်းကျေနပ်တယ်.... (17)
ကောင်းကျိုးပြု လူသားများရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (16)